N'oge okpomọkụ njem nleta na-enuga Italy na ndekọ ọnụ ọgụgụ
Location: Mbido » Ịdee » Obodo | Mpaghara » Italy » N'oge okpomọkụ njem nleta na-enuga Italy na ndekọ ọnụ ọgụgụ
Ihe ngosi ihe mgbe ochie na ihe ncheta nke Italytali na-echebara ọnụ ọgụgụ ndị njem nleta na afọ a echiche, na-anabata ihe karịrị nde mmadụ 23 naanị na ọnwa 6 - mmụba nke 7.3 pasent ma e jiri ya tụnyere 2016.
Nọmba ndị ahụ dị elu, ya mere ọnọdụ okpomọkụ dịkwa.
Rome na Latium hụrụ ndị njem nlegharị anya 19,131,268 site na Jenụwarị ruo Juun, nke pụtara mgbakwunye nke 17.6 pasent, na-ewepụta mpako nke ọnụ ụzọ mbata, ruru euro 36,220,370 - elu 14.7%.
Onye mmeri bụ Colosseum dị ka ebe kachasị nleta na thistali n'afọ a.
Anwansi nke Colosseum na Forum Romani - mpaghara kachasị archeologic na-eleta ụwa - hụrụ ụba ọnụego ego mbata na ihe karịrị nde ndị ọbịa 7 ruo afọ a, Minista Omenala Rome kwuru.
Ma ọ bụ Pinacoteca di Brera na Milan n'okpuru nlekọta nke Canadian Mr. James Bradburne, ma ọ bụ ndị Uffizi na Florence na German Director Elke Schmid, ha niile na-ekwu okwu banyere mgbanwe ngosi nka nke na-emezu amụma niile.
Ebe nke abụọ na Italytali nwere nọmba ndekọ bụ ndị Campania were Napoli, Pompeii, Island nke Capri, na Ischia wee nata ndị ọbịa 4,375,736.
Nke a sochiri Tuscany na nke atọ yana ndị ọbịa 3,443,800 n'ime ọnwa isii mbụ nke 6.
Venice bụ ụwa n'onwe ya, wee hụ ndị njem nleta 4 na onye ọ bụla bi na 1 kwa ụbọchị, na-eme ka o sie ike ịchọta ezigbo Venetian ụbọchị ndị a.
Venice nwere 433 gondolas na 600 edepụtara gondoliers, akwa 438 gbakwunyere akwa mmiri 90, ọ wuru ya na obere agwaetiti 124 nke mepụtara obodo a pụrụ iche. Enwetara ndị ọrụ gọọmentị ihe ruru nde mmadụ 28, dịka ọnụ ọgụgụ gọọmentị na-aga n'abalị ma ọ dịkarịa ala ịnọ abalị 1.
Venice nwere ike gbaa naanị ndị ọbịa nde 14.
Shopslọ ahịa 3,000 na-ere n’obodo ahụ, ebe ọtụtụ n’ime ha na-ere ihe ncheta. O nwere ụlọ ahịa ebe a na-eme achịcha iri atọ na otu, mana 31 mechiela kemgbe afọ anọ gara aga. Nke a bụ ezigbo ihe nkiri nye ndị obodo a na-ahụ n'ebe niile ndị njem na intali.
Igwe kpakpando na-agbapụ agbapụ na Venice bụ Airbnb nwere ebe obibi 7,153, na-enye ngụkọta akwa 27,648 na nkezi ọnụego nke euro 195 yana euro 90 maka otu ọnụ ụlọ.
Ọ bụghị ezigbo ahịa… mana Venice bụ Venice, ọnweghị oke maka ọnụego ịrị elu n'oge oge dị elu.
Shipsgbọ mmiri na-ebugharị nnukwu ebili mmiri na ọnụ ọgụgụ buru ibu na ndị ọbịa 1.6 nde kwa afọ. Mana ndị ọbịa a na-eme ka Marcus Square bụrụ ebe agha mgbe ọtụtụ puku ndị njem na-eduzi nche anwụ ma na-alụ ọgụ n'etiti ìgwè mmadụ ahụ.
Ọdọ mmiri Como a ma ama ma ama ama ahụla ndị mbata si n'akụkụ ụwa niile n'oge okpomọkụ a, ebe ịnọdụ ala n'ụgbọ mmiri na-abụkarị ihe na-eweta obi ụtọ.
Touristslọ ọrụ ndị njem na Piazza Cavour, Como, wakporo ndị njem a n'oge ọkọchị a ma nwee ogologo oge - na-eme ka o sie ike ịghọta ihe kpatara Office dị mkpa na enyemaka na-enye aka ga-emechi na mbido Septemba a maka ihe ọma. O doro anya na njikwa ahụ kwenyere na ịntanetị bụ ihe kachasị mma iji nyere aka nyocha site na ndị njem ụwa niile furu efu na Como na ndị njem dara ogbenye na-enweghị ohere ịntanetị ma chọọ ezigbo ndụmọdụ banyere ókèala ahụ.
Mgbe m na-azụta tiketi ụgbọ oloko nke mbụ maka ụgbọ oloko dị n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè, m na-achọ ihe efu maka klaasị mbụ na ụgbọ oloko dị na Milan nke nwere kilomita nke ụgbọ ala nke klas nke abụọ. Mgbe ọ jụrụ onye nduzi ebe oche klas mbụ dị, ọ sịrị na ọ nweghị klaasị mbụ n'ụgbọ oloko ndị a (nke na-enweghị ọbụna otu oche efu!). Ya mere, gịnị mere ha ji resị m tiketi mbụ? Agwara m… “asked jụrụ maka ya.” Ajukwa m ebe Officelọ Ọrụ Njem Nleta dị, a gwara m, “N’ebe ahụ… ebe mmadụ niile na-abịa.”
Italian na-egbuke egbuke mmanya na-akpali mmasị nke onye na-edekọ ihe nkiri Tay Bell
Zongolica: Kacha ọhụrụ so na .travel ndekọ
Disneyland Resort na-enye ntụrụndụ dị egwu n'oge okpomọkụ
Nkịtị na-alaghachi n'ọdụ ụgbọ elu mba ụwa nke Jamaica
Canada: Enweghị ule nnabata COVID-19 ọzọ maka…
Ndị na-eme njem nlegharị anya Italy kacha mara mma.
Ndị na-egwu ahịa ahịa Ureteral Stent, nyocha SWOT, igodo ...